के हो सेक्स क्यालेन्डर ? छोरा या छोरी जन्माउने भन्ने निश्चित गर्न सेक्स क्यालेन्डर कति सहयोगी ? « Sajha Page
प्रकाशित मिति: March 30, 2018
गर्भ राख्दा नै छोरा या छोरी निश्चित गर्न सम्भव रहेको दाबी अझै हराएको छैन । गर्भको सन्तान गर्भ राख्ने दिनमै निश्चित गर्न सघाउन चिनिया क्यालेन्डर, जापानी क्यालेन्डर लगायतका धेरै क्यालेन्डर पछ्याउनेहरुको संख्या अझै उस्तै छ ।
के यो सम्भव विधि हो त ?
ज्योतिष घिमिरे पनि पूर्णिमाको समयमा गर्भ बस्यो भने छोरा र औँसीको रातमा गर्भ बस्यो भने छोरी जन्मिने मान्यतामा सहमत छैनन् तर सुत्ने आशनको दिशाको प्रभाव गर्भमा पर्ने दाबी भने उनी गर्छन् । घिमिरेका अनुसार उत्तर र पूर्वको दिशाको कोण ईशान हो । यो पानीको स्थान हो । पानीको स्थानमा सुत्यो भने चिसोले यौन शक्ति कम हुन्छ र गर्भमा बच्चा बस्ने सम्भावना पनि कम हुने उनको तर्क छ ।
‘मंगल ग्रह छ भने छोरा जन्मिन्छ, बुधबार गर्भ बस्दा छोरी जन्मिने सम्भावना हुन्छ,’ उनको दाबी छ, ‘बिहीले छोरा, शुक्रको प्रभावले छोरी हुन्छ । शनिको प्रभावले गर्भ खेर जान सक्छ ।’ उनले खानपिनका कारण पनि छोरा वा छोरी जन्मने तर्क गरे । बेलायतमा भएको अध्ययनले समेत यो देखाएको थियो । उनीहरुले अध्ययनमा क्यालोरीको गणना गरेका थिए । ज्योतिष उपाध्याय धेरै रोटी खायो भने छोरा जन्मिने दाबी गर्छन् । उनको दाबीअनुसार भात धेरै खायो भने छोरी जन्मिन्छ ।
सिभिल अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति विभागकी रजिस्ट्रार डा. रीमा महर्जन औसतमा २८ दिनको महिनाबारी हुने चक्रमा सहमत छिन् । महर्जनका अनुसार २८ दिनको महिनाबारीको साइकल छ भने पछिल्लो महिनाबारी हुनुभन्दा १४ दिनअगाडि महिलाको अण्डा फुट्छ । महर्जनका अनुसार एक हप्ता महिनाबारी तलमाथि हुनु सामान्य हो । त्यसैगरी सिभिल अस्पताल स्त्री तथा प्रसूति विभागकी रजिस्ट्रार डा. ईशा श्रेष्ठ महिलाको अण्डा फुटेको समयमा यौन सम्पर्क भयो भने गर्भ रहन सक्ने बताउँछिन् ।
‘अण्डाको जीवनचक्र २४ घण्टाको हुन्छ । महिलाको अण्डा फुटेको २४ घण्टासम्म यौन सम्पर्क भयो भने गर्भ रहन सक्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अण्डा फुटेको २४ घण्टा सम्ममा पुरुषको शुक्रकिट महिलाको योनिबाट भित्र छि¥यो भने गर्भ रहने सम्भावना बलियो हुन्छ ।’ महिलाको अण्डा फुट्ने समय निश्चित भने हुन्न तर अण्डा फुटेको दिनबाट दुई हप्तामा महिनाबारी हुने समय निश्चित हुन्छ ।
नवौँ दिनभन्दा अगाडि र १७ औँ दिनभन्दा पछाडि गर्भ बस्ने सम्भावना कम हुने बराल बताउँछन् । पिरियड साइकलको गणनाबारे चिकित्सक र ज्योतिषशास्त्रीबीच समानता देखिन्छ । ज्योतिष उपाध्याय महिनाबारी भएको १८ रातपछि गर्भ रहने सम्भावना कम हुँदै जाने बताए । सामान्यतः रातका समयमा यौन सम्पर्क हुने मान्यतामा ज्योतिषहरुले रातको गणना गर्छन् ।
ज्योतिष घिमिरे र उपाध्याय १२ बजेपछिको समयमा यौन सम्पर्कपछि गर्भ बसेको खण्डमा बच्चा तेजस्वी हुने दाबी गर्छन् । ‘दिउँसो यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो हैन, दिउँसोको समयमा बसेको गर्भले ग्रहका कारणले जन्मिने बच्चामा समेत असर पर्छ,’ घिमिरेको सुझाव छ, ‘बिहानको सूर्य उदयको समयमा यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन ।’
शुक्रबारकर्मीले कुरा गरेका दुवै ज्योतिषअनुसार ६ महिना सूर्य उत्तरायण हुन्छ । उत्तरायण भएको बेला सूर्य पूर्ण हुन्छ । ६ महिना दक्षिणायन हुन्छ । यो समयमा सूर्य घटेको हुन्छ । पूर्ण देखिँदैन । माघदेखि असारसम्म सूर्य पूर्ण देखिन्छन् । असारदेखि पुससम्म सूर्य कमजोर हुन्छ । सूर्य कमजोर भएको अवस्थामा जन्मिएको बच्चा कमजोर हुने उनीहरुको मत छ ।
माघदेखि असारमा जन्मिएको बच्चा सक्षम हुन सक्छ । चैतदेखि असार महिनामा जन्मिएको बच्चा धेरै राम्रो हुने ज्योतिष घिमिरे र उपाध्यायको तर्क छ ।-शुक्रबार/नागरिकन्युजबाट